Very ny tadin'ny Lead Yandere aho - Mamakia Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics amin'ny Internet
Very ny tadin'ny lehilahy Yandere Lead
Very ny tadin'ny lehilahy Yandere Lead Average 2.8 / 5 avy amin'ny 39
N / A, manana fomba fijery 22.8K
Isekai, Manhwa, Romance, Shoujo, villainess, Webtoons
Vakiana ianao Very ny tadin'ny lehilahy Yandere Lead, mahafinaritra manhwa.
흑막의 목줄을 놓쳐버렸다 Nifindra tany amin'ny tantara iray aho ary lasa olon-dratsy, Serina izay avy amin'ny fianakaviana Ducal Melford mendri-kaja. Amin'ny maha-olona manan-karena ahy, dia niezaka nieritreritra ny raharahako manokana aho, saingy nanana hevitra hafa ilay tantara. Renim-pianakaviana iray nitonona ho tenany no namerina zazalahy iray – mpandova ny andriana sy mpamosavy mahay – nikasa hanasa atidoha sy hanamainty azy. Zavatra roa no ao anatin'ny fanasana atidoha: 1. Mankatò ny fianakaviantsika. 2. Ary raiki-pitia amin'i Serina. Noho izany, ny yandere miolakolaka nosasana dia variana tamiko… Tsy vitako izany. Tsy maintsy esoriko ny fanasan-doha an'ilay toetra miolakolaka! Raha ny marina, inona ity toe-javatra ity? “Rehefa tsy misy intsony ny fanasan-tsaina, dia hanao izay tiako aho. Koa i Serina, azafady, andao hanao izay tsara indrindra vitanay izahay. ” Voavahako ny fanasan-dohany… fa maninona no toa adala kokoa noho ny teo aloha izy— Nanao fahadisoana ve aho?
Chapter 23.5	Novambra 15, 2021
Chapter 5	Oktobra 25, 2021
Chapter 4	Oktobra 25, 2021
Chapter 3	Oktobra 25, 2021
Chapter 2	Oktobra 25, 2021
Chapter 1	Oktobra 25, 2021
Vady ratsy nataon'ny Emperora
Ireo manam-pahaizana momba ny fitiavana ratsy indrindra